I-StreamGear Fuses Smartphone namakhamera anikezelwe ku-Paradigm entsha ye-Live Live Production neVidiMo - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-StreamGear Fuses Smartphone namakhamera anikezelwe ku-Paradigm entsha ye-Live Live Production ngeVidiMo
I-StreamGear Fuses Smartphone namakhamera anikezelwe ku-Paradigm entsha ye-Live Live Production ngeVidiMo
Isixazululo esisha se-Hardware-and-app siguqula umthombo wevidiyo nowangaphandle ube yipulatifomu ephelele yokukhiqiza, okwenza kube lula kunanini ngaphambili ukudala okuqukethwe okubukhoma okuphezulu
Novemba 7, 2019 - Ukufunda, PA: Abadali bokuqukethwe kwevidiyo abasukela kochwepheshe kuya kwabathanda ukungena kwezokuxhumana kungekudala bangaba nendlela engcono yokwabelana ngombono wabo nabalaleli babo ngemikhiqizo ephezulu esezingeni eliphezulu. Ukuqalisa kokuxazulula izixazululo I-StreamGear Inc. bazophuma ngemodi ebambe ongezansi engqungqutheleni yangakusasa ye-BroadGeeks Summit eNew York City ngokwethula I-VidiMo, inhlanganisela entsha ye-hardware kanye nohlelo lokusebenza eguqula umthombo wevidiyo we-smartphone nowangaphandle ube indawo ephelele, yokukhiqizwa kwamavidiyo kanye nendawo yokuhambisa.
Inikeza indlela elula yokwenza futhi yabelane ngokuqukethwe kokuqukethwe kwevidiyo ebukhoma, uhlelo lwe-VidiMo lwenza umuntu oyedwa one-smartphone nekhamera yevidiyo akhiqize imithombo eminingi, imibukiso yesithelevishini engasakazwa bukhoma, iqoshwe noma zombili. Ngenkathi ikhamera yekhamera ye-smartphone yathuthuka ngokuhamba kweminyaka, ayisekho ukufana kokusebenza okucebile kokuqamba - njengokusondeza kwe-optical, ukugxila kwe-tactile, ukulawula kwe-iris kanye nokujula kwenkambu - yevidiyo enikezelwe noma ikhamera ye-DSLR. I-VidiMo yenza abasebenzisi basebenzise okuhle kunabo bobabili imihlaba, ngokuletha I-HDMI umthombo wevidiyo ungene kwi-smartphone yabo futhi uyihlanganisa nekhamera yefoni neminye imithombo.
I-VidiMo - i Video diphinda uqhubeke Moi-bile - yenza noma ngubani ukuthi abe inkanyezi yevidiyo yomphakathi noma intatheli yesakhamuzi. Ekusetshenzisweni kwayo okulula, i-VidiMo yenza abasebenzisi basebenzise ingaphandle I-HDMI umthombo wevidiyo ungene kwi-iOS yabo noma i-smartphone ye-Android bese uyisakaza. Kepha okubanzi kwe-VidiMo okubanzi, okuthuthukile nokusheshayo, esibonakalayo esivumayo futhi sinika abakhiqizi ithuba lokudala ukubukwa okuphoqayo, okubukeka njengobungcweti ngesikhathi sangempela ngaphandle kokudinga ukuhlela nokulayisha kamuva.
Uhlelo lwe-VidiMo luqukethe i-VidiMo Go Hardware ne-VidiMo App software yama-smartphones e-iOS ne-Android. Ukwakheka okuhle komzimba kweVidiMo Go kwakha isixazululo esiphelele sokukhiqizwa ngesandla, sisebenza njengethuluzi lokuthwebula; ukunamathisela noma ibuphi usayizi we-smartphone kukhamera esebenzayo noma yezemidlalo / yesenzo; kanye nokuvumela ukuma okuguqukayo kwefoni kube nokuxhumana okulula nohlelo lokusebenza. Ukuthwebula i-VidiMo Go bukhoma I-HDMI nezibonakaliso zomsindo we-analog zingene kwi-smartphone, futhi zinikwa amandla ibhethri elingashintshi nelingaphinde lisebenze. Inhlanganisela ye-VidiMo Go eyingqayizivele yokusebenza nokusebenza kwama-ergonomics kuholele ekutheni ikhethwe njengomuntu wokugcina ama-2019 International Design Excellence Award (IDEA) yi-Industrial Designers Society of America.
Okwamanje, i-VidiMo App inikezela ngethuluzi eliphelele lokukhiqiza elibukhoma ku-smartphone. Embukisweni ngamunye, abasebenzisi bangashintsha phakathi kwezakhiwo eziyisithupha ezenziwe ngokwezifiso ezihlangana nemithombo yevidiyo ebukhoma nemisindo - kufaka phakathi I-HDMI umthombo nekhamera yangaphambili noma yefoni engemuva - enezithombe, umbhalo nokudlala kabusha kwezingoma ezirekhodwe ngaphambili. Lapho sekuyisikhathi sokuya bukhoma, lo mbukiso ungaqoshwa ku-smartphone bese usakazwa bukhoma kusetshenziswa izinsizakalo zeqembu lesithathu (ngezisetho ze-YouTube ™ Live, i-Facebook ™ Live neTwitch ™) noma iseva yangasese.
I-VidiMo ingumkhiqizo wokuqala ovela kwa-StreamGear, unjiniyela wokuxazulula izixazululo ezintsha kodwa futhi onolwazi kakhulu kumakhiqizi osebenza egxile kumathuluzi wokwakha enza kube lula ngabasebenzisi ukudala ividiyo esezingeni eliphezulu. Ithimba lobuholi leSideGear linomlando omuhle kakhulu wokuphumelela ekukhiqizeni ividiyo, imidiya yedijithali kanye nezimakethe zokusakaza bukhoma. Isikhulu esiphezulu sale nkampani, uDarryl Spangler, usebenze nobuchwepheshe bokusakaza kusukela nge1995 futhi usebenza njengoMongameli wabasabalalisi abahlonishwayo be-Mobile Video Devices. Umsunguli we-BroadGear's, uGerard Virga, ubekhona embonini yokusakazwa kwemithombo yezindaba selokhu yasungulwa, kwathi kwa2011 kwathiwa Ukusakaza Ama-Media Uhlu lwe- "All-Stars" lukamagazini ngeminikelo yakhe endle.
"Inhloso yethu ukwenza ukukhiqizwa kwamavidiyo asezingeni eliphakeme aphile futhi afuneka kakhulu kuwo wonke umuntu kusuka kuma-hobbyists kuya kwizazi ezinolwazi, ngakho-ke angabelana ngemibono nangemibono yawo nomhlaba ngezindlela zokuzibandakanya," kusho uSpangler. "IVidiMo isinyathelo sokuqala esijwayelekile, futhi impendulo esiyitholile kuze kube manje emibonisweni yangasese ibe yinhle. Akukho okunye emakethe okwenzela konke okwenziwa yiVidiMo, futhi sijabule kakhulu ukukuveza okokuqala okokuqala ukuze abakhiqizi bakwazi ukuzibonela. ”
"Izithangamu zemidiya yezenhlalo zenze ukuthi ukusatshalaliswa bukhoma kusatshalaliswe kungenzeka kube izigidi zabasebenzisi, kepha ukwamukelwa kwamakhono abo okubukhoma kukhawulelwe ukuntuleka kwamathuluzi alula wokwenza imibukiso ebukhoma ephezulu ngokuqukethwe okuhleliwe, okulayishiwe," kusho uVirga . "I-VidiMo ingakushintsha lokhu futhi kube yinto egqugquzela ukukhiqizwa kokusakazwa bukhoma ukuze ihambelane ngokwengeziwe ngokuvumela abasebenzisi ukuthi bazenzele kalula imishini yokuzikhiqiza, yokusakaza, ibukhoma."
Ukutholakala kwezentengiso kweVidiMo kulindeleke kwikota yokuqala ye-2020. Ngeminye imininingwane ngeVidiMo, sicela uvakashele www.streamgear.io.
Mayelana ne-StreamGear - I-StreamGear (www.streamgear.io) igxile ekuthuthukiseni amathuluzi enza kube lula kubasebenzisi ukwenza ividiyo esezingeni eliphezulu. Ithimba lobuholi bale nkampani linolwazi olungaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu ekukhiqizweni kwamavidiyo, imidiya yedijithali kanye nezimakethe zokusakaza bukhoma. Umkhiqizo wokuqala we-StreamGear, i-VidiMo, uguqula umthombo we-smartphone nevidiyo ube isisetshenziswa esigcwele, ukukhiqizwa kwamavidiyo kanye nesikhungo sokuhambisa, okwenza kube lula ukwedlula zonke izifundiswa nabathakazelayo ukudala nokwabelana ngokuqukethwe kwevidiyo ebukhoma.
I-copyright 2019 StreamGear Inc. Wonke amalungelo agodliwe. Zonke izimpawu zokuthengisa ziyimpahla yabanikazi bazo. Izici, izintengo, ukutholakala kanye nokubekiwe kungashintshwa ngaphandle kwesaziso.
Bhala Ukuguqula Ukuxhumana
Okuthunyelwe kwakamuva nge-Write Turn Communications (bona konke)
IMagewell to Premiere Ultra-Compact, 12G-SDI M.2 Capture Card at ISE 2020 - Disemba 10, 2019
I-StreamGear Fuses Smartphone namakhamera anikezelwe ku-Paradigm entsha ye-Live Live Production ngeVidiMo - Novemba 7, 2019
Ukuhambisa Amamodeli we-Magewell New Eco Capture nama-Debuts aseNyakatho Melika ku-2019 NAB Show New York - Okthoba 10, 2019
AV Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Capture I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor intatheli LIVE + production Umlobi smartphone social media Ama-spears nama-Arrows ukusakazaGear Ukusakaza Ishintshi Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum I-Capture yevidiyo Umlingisi wevidiyo I-VidiMo	2019-11-07
Ngaphambilini: QHAQA UKUZE UVULEKELWE NGOKUPHELELE NGOKUPHAKATHEKILE KOKUPHILA KAKHULU KWESIQINISO SE-2019 RUGBY World CUP TO A PEAK 12.8 MILLION VIVIVIVINES I-ITV
Olandelayo: IFomethi yeBlackmagic RAW Isetshenziswa ku-Indie Science Fiction Thriller, ePortals